अरूण तिवारीको एकल रचनामा आयो एल्वम 'ऐना' (अडियो सहित ) - Entertainment Khabar
अरूण तिवारीको एकल रचनामा आयो एल्वम ‘ऐना’ (अडियो सहित )
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २९, २०७७ समय: २२:१३:१०
नेपाली सांगीतिक छेत्रमा निकै सक्रिय रुपमा लागिरहनु भएका गायिका डा. रानी शाक्यले आफ्नो सांगीतिक एल्वम ‘ऐना’ (Aena) आफनै युट्युब च्यानल मार्फत लोकार्पण गर्नु भएको छ । एल्वममा अरूण तिवारीको एकल शव्द रचनामा दशवटा अति सुमुधर र जीवन्त एकल र युगलगीतहरू समावेश गरीएका छन । जीवनभन्दा पर खासमा केही छैन अनि ऐनाभन्दा नजिक पनि कोही छैन । जीवन यौटा अनुभव हो र ऐना यथार्थ । यही अनुभव र यथार्थबीचको चक्रलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ सांगीतिक एल्वम ‘ऐना’मा । गायिका डा. रानी शाक्यको यो एल्वम गायिकाको सांगितिक यात्रामा एक गहनतम फड्को हो । विशेषत : यो एल्बम जीवनका गीतहरुले भरिएको छ ।जहाँ हाँसो, रोदन, बिछोड, संयोग तथा दर्शनका छनक देखिन सक्छ । गायिका रानी शाक्यले आफ्नो कोणबाट गीतमा ज्यान दिएकी छिन् । एल्वममा वरिष्ठ संगितकारहरू मधु क्षेत्री, जीवित जल्मी, विक्रम थापा, दिपक शर्मा, नकुल कार्की र दिपक राज गौतमले संगीतबद्ध गर्नु भएको छ ।